Kuratidza zvinyorwa neelebheri dhamu
Sushi igomba rine dike pane Černá Desná river. Inowira pasi peRabe River Board, iyo inoshandiswa nehurumende, iri muHradec Králové. Imiti yeJablonec nad Nisou inoshanda mumvura.
Chinangwa mvura basa iri mvura ikwanise kuwanika inonzi muunganidzwa kwemvura mbishi kuti remunharaunda mvura wemuTesitamende avhareji mari 320 l / s, zvigadziriswe yemafashamo, kukwana kudzivirira nzvimbo akarara pasi tangi pamusoro dzakakwirira mvura, kuona refu residual chokubuda murwizi nokuyerera pazasi dura, simba kushandiswa uye chinangwa hove kurima.
Kuedza kwekutanga kuvaka matura mu inizera besin kunodzokera mafashama muna 1897. Souš yedamu paČerná Desná murwizi rwakareba makiromita 7,250 yakavakwa pakati pa1911 na1915. Chirongwa ichi chakagadzirwa naziyunivhesiti Ing. Otto Intze. MunaSeptember 1916, rimwe dziva rakaputsika paBílá Desná iri pedyo, uko kufambiswa kwemafungu kwakakonzeresa kukuvadza kwakawanda kwezvinhu uye zvakare kwakauraya hupenyu hwevanhu. Iyi njodzi yakave nemhedzisiro pakuenderera mberi kwekushandiswa uye basa reSouš dhiza uye…